अस्पतालबाट लेखे पोख्रेलले मेयरलाई खुलापत्र तपाई सरकार प्रमुख हो कि होइन र मेयरसाब ? | AbcSanchar.com
अस्पतालबाट लेखे पोख्रेलले मेयरलाई खुलापत्र तपाई सरकार प्रमुख हो कि होइन र मेयरसाब ?
प्रकशित मिति : २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:०६
आज मैले पत्रिकाको दुरुपयोग गर्दै तपाईंलाई यो पत्र लेख्दैछु । पत्रिकामार्फत सार्वजनिक पदासीन व्यक्तित्वलाई पत्र लेख्ने काम पाठकको हो । आफैले आफ्नो कुरा सम्पादकीयमार्फत भन्ने हो । यो पत्रकारिताको विश्वव्यापी अभ्यास हो । त्यसैले यो पत्र पत्रिकाको सम्पादक आफैले लेखेर छाप्नुलाई दुरुपयोग पनि मानिन सक्छ ।
म यतिबेला कोहलपुरस्थित कोभिड अस्पतालको ‘क्याविन ए’बाट तपाईलाई पत्र लेख्दै छु । मेरो दायाँ–बायाँ दुईवटा बेड छन्, जसमा मेरा अल्सरसहित कोरोना संक्रमण देखिएका पिताजी र टाइफाइडसहित कोरोना संक्रमण देखिएकी मेरी माताजी हुनुहुन्छ ।
उहाँहरुको बीचमा भूँइमा म्याट बिछ्याएर गत २६ गतेदेखि म कुरुवाको रूपमा बस्दै आएको छु । माता भने ३० गते यहाँ आउनुभएको हो । पिता–माता अस्पतालमा, म कुरुवा, मेरा घरका सबै ‘होम–क्वारेन्टाइन’मा छौ, यो बेला । यस्तो बेलाको मनोदशा, छट्पटी र जोखिम कस्तो हुन्छ भन्ने मैले राम्रोसँग भोगे । दुईजना कोराना संक्रमितको बीचमा बसेर म तपाई र तपाईको परिवारको स्वास्थ्य सधैं राम्रो होस्, कुनै समस्या नदेखियोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु ।
संसार कोभिड–१९ बिरुद्ध लड्दै छ । संक्रमित पहिचान गरी उनीहरूलाई कोरोनामुक्त बनाउँदै समाजलाई नै कोरोनाबाट मुक्त बनाउन संसारका सबै संरचनाहरू परिचालित छन् । तपाई प्रमुख रहेको स्थानीय सरकार र त्यस मातहतका संरचनाले पनि पक्कै त्यही गरिरहेको होला । तपाईका भाषण र अन्तर्वार्ता हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । तर मसँग यो बीचमा अत्यन्तै तीतो अनुभव रह्यो । म यो पत्रमार्फत तपाईलाई त्यो विषय सुनाउन चाहन्छु । त्योभन्दा पहिले मैले यो पत्र सार्वजनिकरूपमा किन लेख्न लागे भन्ने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
तपाई र तपाई मातहतका संरचनाको नेतृत्वकर्ताहरूसँग पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा अवस्थाको जानकारी गराउँदा झनै निराश हुनप¥यो । त्यसैले सार्वजनिकरुपमा तपाईलाई भनेपछि मैले त जे भोगे भोगे अरु मजस्ता सामान्य नागरिकहरुले त्यो पीडा भोग्न पर्दैन कि ? तपाईले केही सुधारका लागि पहल गर्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षाका साथ यसरी सार्वजनिक पत्र लेखेको हुँ ।
मेरो पिता अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो । रगत चढाउनुपर्ने भयो । अचेतझै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । डा। मीनचन्द्र अधिकारीले कोरोना परीक्षण गर्न सुझाउनुभयो । मैले मेरो वडाको अध्यक्ष भरत अर्याललाई फोन गरे । उहाँले बर्ष सोध्नुभयो, मैले ६८ बर्ष भने । ‘मैले नाम पठाइदिन्छु १२ बजेतिर पद्मोदय जानुहोला’ भन्नुभयो । बडाअध्यक्ष, व्यस्त मान्छे ।
नाम पठाउन भुल्न सक्नुहुन्छ भनेर मेरी श्रीमती सुलोचनालाई १० बजे वडामा गएर सिफारिस ल्याउन भने । उनले बडा अध्यक्षलाई फोन गरिन् । नाम गइसकेको रहेछ । अनि मैले सुलोचनालाई १२ बजे पद्मोदय गएर लाइन लाग्न र पिताको पालो आउँदा फोन गर्न भने ।
मेयरसाव, मेरो पिता गम्भीर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला । ब्लड बैंकबाट १ पिन्ट रगत लिएर चढाउने तयारीमा थियौं । म पत्रकार भएकाले स्वाव लिन जाँदा ‘लाइन मिचेर पत्रकारले सेवा लियो भनेर कसैले भन्लान’ भन्ने पनि ठाने । पिताको अवस्था अचेतझै थियो । उहाँलाई त्यो बेलाको कुनै कुरा याद नै छैन । फेरि पत्रकारको बाबुको स्वास्थ्य जति महत्वपूर्ण छ, अन्य नागरिकको स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ भनेर मैले पालो मिच्न चाहेन र शुरुमै सुलोचनालाई लाइन लाग्न पठाए । पालो आयो, सुलोचनाले फोन गरिन् मेयरसाव १ अनि म पितालाई मेरो गाडीमा लिएर त्यहाँ पुगे ।
पितालाई मैले अस्पतालबाट गाडीमा चढाउँदै गर्दा वीरकेशरी गौतमले फोन गरेर ‘पालो आयो, नाम बोलायो’ भनेर पनि सूचना दिनुभयो । उहाँ पनि स्वाव दिन त्यहाँ पुग्नुभएको रहेछ । म अचेत अवस्थाका पितालाई लिएर त्यहाँ पुगे ।
पुरै अस्त–व्यस्त छ, त्यहाँ । पालो मिचियो भनेर एउटा समूहले आपत्ति जनाई पनि रहेको थियो । खटिएका कर्मचारीहरुले फोन गर्दै घरपरिवारका सदस्यलाई बोलाउँदै स्वाव लिइरहेका थिए । म नजिकै गई ‘ब्लड चढाउन रोकेर आएको छु, पालो पनि आयो रे १’ भन्दै स्वाव लिन आग्रह गरे । त्यो बेला पिता गाडीमा सुतिरहनु भएको थियो । म पौने घण्टा त्यहाँ अनुनय–बिनय गर्दा कोही कर्मचारीले सुन्न चाहेनन् । ‘दिदीलाई चाँडो ल्याऊ, भतिजलाई बोलाऊ, भाइ त्यो बाइक लगेर मेरी बुहारीलाई ल्याइदेऊ अनि तिम्रो स्वाव लिदिम्ला’ यस्ता आवाजहरु आइरहेका थिए तपाईका कर्मचारीहरुबाट मेयरसाव ।
पौने घण्टा मलाई नसुनेपछि मैले मेरो बडाध्यक्ष भरत अर्याल र स्वाव लिइरहेको बडाका अध्यक्ष रमेश पाण्डेलाई फोन गरेर आपत्ति जनाए, मेयरसाव । उहाँहरुले ‘बुझेर खबर गर्छु’ भन्नुभयो, सायद अहिलेसम्म बुझिरहनुभएको होला । राम्रोसँग बुझ्न समय लाग्ने नै भयो, मेयरसाव । तपाईले पनि राम्रोसँग बुझनु होला उहाँहरुजस्तै ।
भोलिपल्ट ४,४६०।– रुपैयाँ तिरेर पिताको स्वाव परीक्षण गराए स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा । कोरोना देखियो, अहिले यहाँ छौं । केही पत्रकार साथीहरूले ‘के भएको ?’ भनेर तपाईको स्वास्थ्य प्रमुखसँग सम्पर्क गर्नुभएछ, ‘केही होइन, कम्युनिकेशन ग्याप भएको हो’ भन्ने जवाफ पाउनु भएछ । मेयरसाव, बिरामी पिताको स्वाव लिन लाइन लागेर दिनभर कुरेर आफ्नो पालोमा पुग्दा पनि स्वाव दिनका लागि कस्तो ‘कम्युनिकेशन’ गर्नुपर्ने हो ? कृपया मलाई जानकारी गराइदिनु होला १
त्यतिमात्र कहाँ हो र मेयरसाव, मेरो मातालाई ज्वरो आइरहेको थियो । घाँटी सुकेर थुक निल्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अस्पतालमा जाँच गराउँदा टाइफाइडको रिपोर्ट आयो । पितालाई देखियो, माताको त्यो लक्षणमा हैन र मैले उहाँको कोरोना परीक्षण गराउने मेयरसाव ? कि कस्तो बेलामा हो ? मेरी श्रीमती सुलोचनाले नगर स्वास्थ्य प्रमुखलाई फोन गरिछन्, ‘मिलाउँछु मिलाउँछु’ भन्ने जवाफ आइरह्यो । तर मिलेन मेयरसाव ।
माता झनै कमजोर हुँदै जानुभयो । म कोभिड अस्पतालमा छु । घरमा सबै ‘होम–क्वारेन्टाइन’मा छन् । माताको अवस्था खस्कँदो छ, तर तपाई
नक्कली लाइसेन्स बनाउने ७ जना पक्राउ
आज शनिबार पुस १० गते विप्लव पार्टीको नेपाल बन्द
इप्रका भालुवाङले २४ घन्टा भित्र हत्या गर्ने ३ जना पक्राउ
प्रहरीको बर्दीमै तास खेल्ने १४ जना प्रहरीलाई कारवाही
१७ नेपालीको शव लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मलेशिया
हात्तीले दुई दर्जन घर भत्काए पछी स्थानीय चिन्तित
नेकपा विप्लव कार्यकर्ताद्वारा सार्वजनिक बसमा तोडफोड
१० माघ २०७७, शनिबार १९:५९
१० माघ २०७७, शनिबार ०७:२९
१० माघ २०७७, शनिबार ०७:२०
१० माघ २०७७, शनिबार ०७:१७
९ माघ २०७७, शुक्रबार १९:२५